Phupha ngochukumisayo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Iphupha lokuchukumisa. Amaphupha yimifanekiso yamava akutshanje kunye namadala adibana kunye, kwaye nengqondo izama ukuqonda. Ukuba unomdla kwesi sihloko, apha unokufumana indlela yokutolika kunye nokuba athetha ntoni amaphupha.
Xa utolika intsingiselo yephupha "uchukumise", umxholo wephupha unentsingiselo ekhethekileyo. Kungenxa yokuba kukho iintsingiselo ezahlukileyo, nokuba zikuchukumisa kancinci okanye nzima.
Kananjalo, into okanye umntu ochukumisiweyo ephupheni ubalulekile njengoko inika imikhondo yokucaciswa kwephupha. Ukuba into echukumisiweyo ibonakala ibalasele ephupheni, imiba yolu phawu lwephupha kufuneka isetyenziselwe ukutolikwa okwandisiweyo kwephupha.
1 Uphawu lwephupha «ukuchukumisa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuchukumisa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuchukumisa» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuchukumisa» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngaphakathi ekutolikeni ngokubanzi kwamaphupha, isimboli yephupha "inokuchukumisa" njengophawu lokulangazelela. Itolikwa njenge ukusondela, ukuthanda nokuthantamisa. Ngokukodwa ukuba ephupheni lakhe uchukumisa omnye umntu ngobumnene okanye yena ngokwakhe uyachukumiseka, le ntetho kufuneka isetyenziswe.
Ukuba uphawu lwephupha "ukuchukumisa" luhamba kunye nemvakalelo yomsindo okanye umnqweno wokusebenzisa ubundlobongela ngokwasemzimbeni, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kuyakubona oku njengophawu lokuchasa ngokwasemphefumlweni. Umntu ophuphayo uqhanqalazela imeko apho kungenakwenzeka ukuba azikhusele. Ebomini, nangona kunjalo, akunyanzelekanga ukuba ibe luhlaselo lomzimba xa uphupha, kunokuba ube nemvakalelo ngokubanzi yokungabi namandla.
Inomdla kakhulu kutoliko jikelele lwesimboli yamaphupha "ukuchukumisa" ikwayinto edlalayo ephupheni. Umzekelo, ukuba yinto yonqulo efana nomnqamlezo, ibhayibhile, okanye itempile, oko kuthetha imigaqo yokuziphatha. Ezi zenza isiseko sezenzo zakho kwi el mundo ngokwenene. Ukuchukumisa umhlobo ephupheni ikakhulu kubhekisa kwiimpawu ezisekwe kwiimvakalelo ezinyanisekileyo.
Inqaku elikhethekileyo kutoliko jikelele lwamaphupha kukuchukumisa umntu ofileyo ephupheni. Imeko enjalo yamaphupha kufuneka ibonise umphuphi ukuba ulangazelela ukuphela kwenqanaba lobomi elinzima.
Uphawu lwephupha «ukuchukumisa» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, ukuchukumisa ephupheni kufanekisela umnqweno wokuseka unxibelelwano. Ukuba iphupha lichukumisa omnye umntu ephupheni lakhe, ukunye naba bantu ukuvumelana. Ukuchukumisa iqabane lakho ephupheni kutolikwa njengomboniso wolwamkelo.
Ukongeza, ngokutolikwa kwengqondo yamaphupha, iphupha elithetha "ukubamba" libonisa imvakalelo yokungonwabi okanye ukuzikhusela kuhambelana nokuchukumisa ephupheni, umphuphi kufuneka azibuze ebomini apho kuthintela khona ukuchukumisa kwakhe. . Ngaba ngumntu nje ochukumisayo okanye ngaba uziva ngakumbi?
Xa uchukumisa umntu ofileyo ephupheni, iphupha libonwa ngokwasengqondweni iinkumbulo ntoni ngalo lonke ixesha babefihliwe kukungazi nto ephupheni. Ukuphupha kuya kufuneka ngoku kujongwane nako kwaye kuwenze xa kufanelekile.
Uphawu lwephupha «ukuchukumisa» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "ukuchukumisa" lumele ukuhanjiswa kwamandla kwinqanaba lokomoya okanye lengqondo.